Govt still quiet amid reports of 'human rights violations' in Zimbabwe – The Citizen
Govt still quiet amid reports of ‘human rights violations’ in Zimbabwe
The matter is reportedly being discussed by the department of international relations and cooperation (Dirco), which will 'issue a statement'.
Zimbabwean journalist Hopewell Chin'ono, centre, was arrested on Monday. AFP/File/Jekesai NJIKIZANA
Among those targeted was prominent Zimbabwean investigative journalist Hopewell Chin’ono (49), who is still in police custody after his recent arrest in his home country’s capital of Harare on 20 July. He is accused of inciting Zimbabweans to join a planned anti-government protest during the coronavirus outbreak.
In addition, renowned Zimbabwean author Tsitsi Dangarembga (61) was recently arrested during anti-government protests and was released on bail on Saturday. The writer was charged with incitement to commit violence and breaching anti-coronavirus health regulations after staging a two-women demonstration in Harare.
Speaking to journalists shortly after bail was granted, Dangarembga said: “I feel that probably, all Zimbabweans want a better life for all Zimbabweans and the people who live here. I think that is bright motive to have, it is good thing to live by and to work for.”